HADDAAD TIHIIN SACAD YOONIS IYO BICIIDE.. JIDKII GUNNIMADA WAAD KU TAAGAN TIHIINE,
Saturday 7th July 2018 16:13:48 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
HOOYOOYINKIIN HANAQAAD GOYSEENE. ISDABA QABTA INTAAN HABLIHIINA GUURKOODA LAGA GAABSAN. OONAY GUURBEELIN.
Odhan maayo waa laba beelood, oo waxaan ku kala saaro garan maayo.Odhanmaayo way kala duwan yihiin oo waa inan iyo abtigii. Odhan maayo waa nacab oo mahayo meel wiilka iyo hooyadii ku kala tagayaan.
Dadku markuu gunnimo doorto waxuu xumaanta ka raadiyaa qaraabadiisa. Waxaan dunida marnaba dadnimada lagu soo sooci karin, marka ruuxu uu abtigii soo dilo, ee hooyadii walaalkeed xabad laabta kaga dhufto, ee inaabtidii aabaheed ugu aaro, inaadeerkii geeridiisa, ee weliba uu dammaashaad iyo faan cirka maro.
Waxaad yaabaysaa marka aad maqasho dhaallinyarada labadaa reer, oo cayda iyo aflagaaddada reeraha dhexdooda ka sheegaya, taas oo hablihii ay ilmaabtiga ahaayeen, oo reerka dhex jooga, oo weliba carruurtii ay udhaleen xambaarsan aan dhagaha looga duwaynin hadal kasta oo xun oo qof inuun wax isku falayaa afkiisa uu ka dhawro.
Waxaad quusanaysaa marka aad maqasho odayaashii labadaa reer oo aadan moodaynin dad inaba damiir ku hadhay, oo xishoodkii iyo xaayadii iyo milgadii odaynimo midna dhiiggooda aanay ku hadhin.
Marka ay weliba tookh iyo baan iyo hanjabaad afkooda wax ay kala xishoonayaan jirin.
Markay dhallintooda oo hablihii reerka lagu qabay wax walba hortooda ka leh ay ku garab taagan yihiin.
Labadan reer dhaqankii soomaalidu lahayd iyo milgadii waxay ka doorteen dullinimo, iyo cadaawad meel ay tagayso aanay garanaynin, oo aan gondahooda dhaafaynin.
Malaha imika dadku islaamnimo, iyo Ilaah laga cabsado, iyo Aakhiro iyo cadaabtii waaba layska ilaaway, oo cidiba curshi iskama dhigto.
Labada reer ee mar dhaartay, ee laba dhaartay, ee saddex dhaartay, malaha qofka mar afraad dhaariyaa, waa ruux isaga laftiisa aanay dhaartu qiime la lahayn, oo aan iyaga waxba dhaamin.
Labadaa reer gunnimada umay kala yaraysan, mar haddii ay warbaahinta darandoorriyayaan, oo qoloba qolada kale waxay doonto ka sheegayso, oo dilkii aanu joogsanaynin, oo kolba qof miskiin ah oo Ilaahay naf gashaday, oo waxuu gaystay aanay jirin, aano, iyo eed laftaad ka dhalatay ka timid ayaa unuunka lagaaga goynayaa ku baxaya.
Labadan reer ee ood wadaagga ah, ee dabka iyo milixd kala qaata, ee cid isaga dhaw aanay jirin, ee qofkii miciinka u ahaa mid waliba ku taamayo inuu naftiisa gooyo, hadday wixii guni samayn jirtay aanay waxba ka laabanayn. Miyaanay marna u tudhin hablahooda guur beelaya, ee ruux waliba ka mildhaabayo, markay reerahan sheegato, ee ninkii soo dooni lahaa, dib isugu noqonayo, ee odhanayo meel wanaagsan ubadkayga gabadhaasi gayn mayso, iyo meel uu nafta kula eerto.
Miyay garan waayeen shil wuu dhacaa, oo nolosha ayaa ku dhisan. Miyay garan waayeen inay caqliga isku soo dabbaalaan oo sidii awoowyaashood yeeli jireen ku tallaabsadaan, oo colaadda ay sii hurinayaan damiyaan.
Miyay garan waayeen Ilaahay idinka ayuu reerahan taladooda idin baday ee sidii awowyaashiin yeeli jireen yeela, oo wax walba waa la maareeyaaye, doqonimadan idinkusii kordhaysa iska soo ooda, oo arrinkan aan cid idiinka dhaw labada reerba aanay jirin caqli ku maareeya, oo hore uga socda.
Ma waxay garan waayeen inay afartan oday isasoo horfadhiistaan, oo iswada garanaya, oo weligood wax isu ahaa, oo aan waxba kala lahayn, oo iyagaa iswada dhalaye, qof waliba eego xanuunka uu dareemayo abtigii iyo hooyadii colaadda uu naftiisa ugu beerayo.
Beelaha somaliland dhammaantood way la qabaan gunnimadaa iyo foolxumadaa raagtay, ee labadaa reer ee aan garaadkooda quruxi ka muuqan wixii soo kala gaadhay, iyo ceebtaa sii kordhaysa ee aan midna ka soo raynaynin, ee aroor walba warbaahinta ka baxaysa ceebtooda, ee kolba midi idaacadaha soo horfadhiisanayo, ee aanu arkaynin foolxumada ka muuqata hadalkiisa.
Waxaad arkaysaa salaadiin ha noqdaan, ama waayeel, ama culimo oo aanay dhibaynin foolxumada iyo gunnimada labadaa reer ka dhex taagan. Waxaad yaabaysaa marka aad aragto iyagoo weliba u cudurdaaraya foolxumada labadaa reer ku dhaqmayaan, oo ay kaba sii qaadayaan faan iyo raganimo, iyo waxbaanu dili.
Qofku xumaanta waxuu ka gaabsan jiray markuu ogyahay inay reeraha kale haybaddii iyo qadarintii ay u hayeen kaga baaba'ayso, oo foolxumadaasi xeer lagula xisaabtamo ay noqonayso.
Haddaanay labadaa reer joojin ceebtaa ay wadaan, waxay gaadhaysaa in habarjeclo, iyo habar garxajisna ka mid yihiin oo la qabaan hadday caqli u noqon waayaan.
Biddaha waxaa la yidhaa ruux aanay wax damqaa jirin, shay keliya ayuu adduunka dareenkiisu ka baqaa. Waxuu bidduhu dareemaa gaajada oo qudha, adduunka wax kale oo damqaa ma jiraan.
Reerkasta ha ahaadaane salaadiinta somaliland wax ka fayaw oo ceebtaa ka maqani ma jiro, saa laba reer oo cidwalba iska xiga ayaa culays lagu saari kari waayay, inay hablaha ay dhaleen iyo kuway qabaan u tudhaan.
Hablaha waxaas oo xumaanto ah dhex jooga, ee meel ay uga kacaan aan haysan, ee weliba cidi ogayn waxa haysta ayaa ah gunnimo aan loo kala sokayn oo salaadiin iyo odayba ay la qaybsanayaan kuwan hunbanida waxba aan ka duwanayn ee ehelkiisa inuu dilo u haysta inuu ku dawoobayo.
Warbaahintu ha ogaadaan masuuliyad ayaa saaran, oo garaad inay adeegsadaan ayaa looga baahan yahay, maaha in inanku mikrofoon, iyo warqad la rooro, oo raadiyo inuu wax qoro. Waxaa looga baahan yahay inuu iska dhigo ruux masuul ah, oo aanu hadallada foosha xun sii qodqodin, oo raadin cid wixii xunba wax xun kaga sii jawaabta.
RABBIGEEN HAYNA SOO HADEEYO. Meel xun ayaynu maraynaa..
[Daawo:-] Madaxweyne Farmaajo Oo Si Meeqaamkeedu Liito Loogu Soo Dhaweeyay Dalka Jabuuti & Xaalada Taagan Oo Guux Ab
Xaalad Biyo La'aaneed Oo Ka Taagan Gobolka Sool & Qayla-dhaanta Bulshada Haraadan Oo Cirka Maraysa + [Muuqaal]
[DEG DEG:-] Hogaamiyaha Kooxda Khaatumo Cali Khaliif Galaydh Oo Magaalada Hargeysa Soo Gaadhay Iyo Dareenada Taagan
Masuul Xisbiga Kulmiye Ka Tirsan Oo Ka Hadlay Xaalada Cakiran Ee Ka Dhex-Taagan Soomalaiya Iyo Kenya
[Top News:-] Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Oo Dalab Cusub Ula Tagay Shirkada DP WORLD & Xaalad Kacsan Oo Taagan.
Wariyayaasha Muqdisho Oo Khaatiyaan Ka Taagan Xafiiska Farmaajo, Jabuuti Iyo Itoobiya Oo Heshiis Xaasaasiya Kala Saxeexd
Mucaaradka Ugu Adag Xukumadda Farmaajo Oo War Lama Filaan Ah Kasoo Saaray Xiisada Somaliya Iyo Kenta Ka Dhex Taagan.
[Daawo:-] Soomaaliya Oo Laga Joojiyay Qaadkii Uga Iman Jirey Dalka Kenya Xili Khilaaf Taagan Yahay